Kismaayo News » FIID-SOOH: Dhul Muslim miyaanay ku dhalan?
FIID-SOOH: Dhul Muslim miyaanay ku dhalan?
Kn: Qofka dhulka muslimiinta ku dhashay ama ku koray si kasta oo uu jaahil u yahay wuxuu dhaqan ahaan u bartay mabaadi’ iyo dhaqamo aan laga tago karin ama aan loo dhawaan karin laakiin qofka dhul gaalo ku dhashay ama ku koray isagoo waxbartay ama Ilaahay ka baqaya ayuu galayaa khaladyo waaweyn oo aan ka suurtoobin dadka muslimiinta la noolaaday.
Nin wadaad ah baa guursaday gabar caddaan ah oo soo islaamtay. Ninkeedii ayay ku tiri reerkayagii ayaan ku soo dhaxayaa. Ninkii saaxiibkiis bay sheeko ku daaheen, kolkaas ayay gurigii wada seexdeen. Gabadhii ma dhixin ee isla habeenimadii ayay soo noqotay. Kolkaas ayay gurigii soo furatay. Nimankii oo sariirtii hurda ayay u soo gashay, kolkaasay sariirtii dhineceeda ka seexatay!.
Si kasta oo ay jaahilad ama faasiqad u tahay naag muslimiin la kortay sidaa ma yeesheen laakiin nàagta gaalada la soo kortay si kasta oo ay u taqwo badan tahay dhaqamadii hore qaar baa ku haraya.
Waxaan arkay dumar soomaali ah oo xero gaalo ka yimid oo xambaarsan dhaqan aan fiicnayn oo aad mararka qaarkood is oranaysid ma waxay doonayaan in ay muujiyaan in aysan dadkaan ka mid ahayn ee ay qoom kale yihiin.
Waxaa ila habboon dumarkaas iyo ragga la nooca ah inay u dhaqmaan sida gaalada markay la joogaan laakiin markay soomaaliya imaanayaan ay soo iibsadaan buugaag ka hadlaysa diinta Soomaalida iyo dhaqankeeda ama ay lasoo tashadaan Soomaalida ama shisheeyaha yaqaan diinta iyo dhaqanka Soomaalida; si aysan meesha ugu facsharmin.